MURTII GAMTAA AWROOPPAA (EU) IRRAA OROMOON MAAL EEGGATA? – Welcome to bilisummaa
bilisummaa January 8, 2016	1 Comment
👉 MURTIIN GAMTAA AWROOPPAA MAAL TAHUU MALA?
👉 OROMOON MAAL GODHUU QABA?
Tags EU Fincila Oromoo
Previous At least 140 killed in Ethiopia protests over land plan: HRW
Next Winnipegger calls for funding cut to Ethiopia after nephew imprisoned amid protests
Hongantoonni hawaasa Oromoo Awropaa afeeramuu irra ture. GA (EU) Oromoo ni tuffat moo Oromoo tu if hin beeksisini? Kana duraas Biraanuu Naggaa akka afeeran ni yaadanna yeroo dhimma beelaa haasawan. Yeroo dhimma keenya haasawan, nuti haasawa sanirraa qooda fudhachuun haqa qofaa miti gargaarsa.